Dhalinyarada reer Muqdisho oo qarka u saaran iney ka tashtaan dowladda Villa Somalia ku eg – Somali Top News
Dhalinyarada reer Muqdisho oo qarka u saaran iney ka tashtaan dowladda Villa Somalia ku eg
March 26, 2019 Somali Top News	0 Comments
Dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa aad u hadal haya qaraxyada iyo dilalka faraha badan ee Bilooyinkii u dambeeyay sii kordhaya.
Hadal heynta ugu badan ayaa malmahan aheyd in dowladda Soomaaliya guushii iyo Barwaaqadii laga sugayay in ay noqotay hadal iyo sawir.
Labadii Sano ee ugu dambeesay waxaa magaalada Muqdisho ku dhintay in kabadan 2,000 oo qof oo shacab u badan, waxaana hadda soo ifbaxaya abaabul hoose oo ay wadaan shacabka reer Muqdisho oo la yaaban waxa qaeaxyada iyo dilalka ku koobay oo magaalooyinka kale aysan kaga dhicin.
Quburo dhanka amniga ah ayaa sheegay in dowladda ay ka gaabisay cadaadiskii la saari jiay Al shabaab ee ahaa in lagu weeraro deegaanada ay Soomaaliya kaga sugan yihiin, balse taa badalkeeda Al shabaab ayaa weeraraya xarumaha dowladda ee Muqidhso markii ay waayeen cid iska dhicisa oo ku dhacda.
Markaad eegto shacabka Muqdisho waxaa laga qaadaa canshuur dhan walbo ah oo gaareysa $16, 556, 504,75 waxaana lacagta ka soo xaroota Xamar loo diraa dowlaha maamul goboleedyada dalka.
Xukuumadda uu hogaamiyo Ra’isul Wasaare Kheyre ayaa u muuqata mid gabi ahaanba ku fashilmatay amniga Muqdisho, waxaana wasiir Isloow uu joojiyay xitaa inaa ka hadlo qaraxyada dhaca iskaba daa inuu shacabka la qeybsado dhibka.
Abaabulka la isaga hor wareejinayo dowladda Federalka waxaa hormuud u ah dhalinyaro dalka wax ku baratay, Odiyaal iyo ganacsato kuwaa oo sheegay in ay ilaashanayaan nafsadooda oo aysan u baahneyn wax dowlad ah iyagoo DF ku tilmaamay Tuugo ku raaxeesata lacagta canshuuraha iyo tan Beesha Caalamka, qarax dambana aysan u dul qaadan doonin.
Waxaa xusid mudan in ay gabi ahaanba hoos u dhacday taageeradii loo hayay Farmaajo markii boqolaal shacab ah lagu dilay Muqdisho oo ilaa hadda aysan wax talaab ah ka qaadin arrimaha nabadgalyada.
← Faah-faahino ka soo baxaya qarax ka dhacay Isgoyska Taleex ee Muqdisho
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo shir uga qeyb galay dalka Morocco →
Ciidamada Kenya oo 8 qof oo Soomaali ah ku dilay gobalka Jubbada Hoose
Xoghayaha NUSOJ, Macalimow oo kulan la qaatay wasiirkii hore ee horumarinta dalka Finland
Webiga Shabelle oo fatahaad hor leh ka sameeyay Gobalka Shabeelaha Dhexe